U-ularsula Iguarán: umzobo wabasetyhini baseLatin America eMacondo | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Uvavanyo, Ababhali, I fantasy, iintlobo, Iincwadi, Inoveli
UGabriel García Márquez, umbhali weMinyaka Elikhulu Yokuba Wedwa.
Ukuba kukho into egqithileyo UGabriel García Márquez Kwakuku-tino apho walanda khona undoqo wamanani awafakayo emsebenzini wakhe, kwaye awuthethi kuphela ngobuntu, hayi, uthetha ngophawu lommi namasiko akhe. Ayinamsebenzi ilizwe okanye ingingqi, U-ularula Iguarán unjalo umzekelo ocacileyo ukuba yenzeka njani kunye nobudala Abafazi baseLatin American.
Abafazi baseLatin basebenza nzima, bomelele, inkokeli kunye nomondli, ngumtshato onothando, ozinikeleyo. Uninzi lwamakhaya aseLatino ayenziwa kwaye agcinwa ngokuzinikela kukamama. Nangona kungabonakali, nguye ngubani onika ubushushu endlwini, oguqula ezo ndonga zine zibe likhaya, kuba inguye uqobo ochitha ixesha elininzi apho. Izigqibo zakho, amasiko, kunye neemfundiso zikhokela abantu obathandayo, nokuba sele bemkile.
1 Umzobo ka-ularsula
2 Iminyaka eyikhulu yedwa
3 UGabriel García Márquez kunye neBhaso likaNobel
U-ularsula Iguarán wayenjalo umfazi waseColombia ngubani, kunye nomyeni wakhe uJosé Arcadio Buendía, yasekwa iMacondo. Wayezimisele kwaye omelele kangangokuba waqala idolophu yakhe ngokuzala umhlali wokuqala, walungisa ucwangco kunye nendawo yezindlu, wagqiba ngemibala eya kuhombisa idolophu, iintyatyambo eziza kurhaxisa umoya wevumba, iintaka Ingagcwalisa isibhakabhaka ngomculo kwaye yayizimisele ukufela uMacondo.
Iminyaka eyikhulu yedwa yinoveli enokubalisa ngayo nawuphi na umntu ohlala eMexico ukuya emazantsi. Kuyinyani ukuba into malunga ne-ularsula ikwenza ukuba uvuse umakhulu, umakazi, umfazi wakho okanye umama wakho. Kwaye ingumntu ongumntu owona mfanekiso ucacileyo kwaye uchanekile wabafazi baseLatin American.
Umzekeliso kaMacondo kunye nenxalenye yabalinganiswa bakhe.
Ibhalwe nguGabriel García Márquez (1927-2014) eMexico, kuthathe malunga neshumi elinesibhozo leenyanga ukugqiba. Yapapashwa okokuqala eBuenos Aires ngo-1967, yindlu yokupapasha yaseSudamericana. Ukususela ngoko yaguqulelwa kwiilwimi ezingama-35, kwaye iikopi ezingaphezulu kwezigidi ezingama-30 zithengisiwe. Ithathwa njenge umsebenzi wobugcisa I-Hispanic yaseMelika kunye nendalo iphela.
Ngo-2007 yahlelwa njenge omnye weyona misebenzi ibalulekileyo yolwimi lwesiCastilian kwiNgqungquthela ye-IV yamazwe onke yoLwimi lwaseSpain. Kwakuloo nyaka kwakhululwa uhlelo olutsha. Ukushicilelwa okutsha kwenziwa ukubhiyozela iminyaka engama-40 yenoveli kunye neminyaka engama-80 yombhali wayo. Oku kufezekiswe kubulelwe kumzamo owenziwe nguMbutho weMfundo yoLwimi lwaseSpain kunye neRoyal Spanish Academy.
Ibi zibandakanyiwe kwiincwadi ezili-100 zenkulungwane yama-XNUMX ukusuka kwiphephandaba lesiFrentshi Le Monde, Uluhlu lweenoveli ezili-100 ezibalaseleyo ngeSpanish ngenkulungwane yama-100 yephephandaba laseSpain i-El Mundo nakwiincwadi ezili-XNUMX eziphambili ngalo lonke ixesha yiNorway Book Club.
UGabriel García Márquez kunye neBhaso likaNobel
UMarquez waphumelela iBhaso likaNobel loNcwadi ngo-1982 "ngenxa yeenoveli zakhe namabali amafutshane, apho kumnandi khona kwaye okwenyani kudityanisiwe kwilizwe elinobunkunkqele bomfanekiso ngqondweni, obubonisa ubomi kunye neengxabano zelizwekazi.
Ifoto yepowusta ebhekisa kwidolophu yaseMacondo-Colombiainforma.com.
Nawuphi na umntu waseSpeyin oye wafunda le noveli uya kuziva ekhethiwe ngomnye wabalinganiswa bakhe okanye iziqwenga zonke. Abasetyhini babona ukukhula kwabo e-ularsula, ubumsulwa bakhe kwi-Remedios "la bella", inkani yakhe e-Amaranta kunye nokuthanda kwakhe okungalawulekiyo kwiRebeca.
Amadoda aya kuhlala ekwazi ukuchonga ukucinga, ukomelela kunye nomtsalane weJosé Arcadios okanye ngeentloni, ukuzinikela kunye nokugcinwa kweAurelians. Ayinamsebenzi ilizwe okanye ingingqi, UMárquez kunye namabali akhe Inxalenye yomphefumlo weLatinos.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » U-ularsula Iguarán: umzobo wabasetyhini baseLatin America eMacondo